शालाह : जसले विभाजित इजिप्टलाई एकताबद्ध गरे » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शुक्रबार, असार १, २०७५ १७:१६ मा प्रकाशित !
एजेन्सी । अघिल्लो महिना च्याम्पियन लिगको फाइनल खेलमा रियल म्याड्रिडका खेलाडी सर्जियो रामोशको ट्याकलमा शालाहको कुममा चोट लगेपछि इजिप्टमा भएको प्रतिक्रियाले शालाहलाई आफ्नो देशमा कति सम्मान गरिन्छ भन्ने देखाउँछ । त्यो ट्याकलको चोटको कारणले शलाहाले विश्वकप नै खेल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नै शंका उठेको थियो । उनको चोटमा इजिप्टको आम मानिसिकतालाई झल्काउने गरि भोलिपल्ट एक इजिप्टेली समाचारपत्र अल–मार्सी अल–युअमले एक हेडलाईन दिएको थियो – “इजिप्टेलीहरु रोएको रात : ‘कसाई’ रामोशले अबु शालाहको कुम खुस्काइदियो ।”
इजिप्टेलीहरुले रामोसलाई सामाजिक सञ्जालमा सरापे । शालाहले रुँदै किभको ओलम्पिक रङ्गशाला छाडे लगतै इजिप्टेली ट्वीटरमा अरबिक ह्यासट्याग “रामोस कुकुर” र “र**को छोरा” टे«ण्डिङ्ग भएको थियो । शालाहलाई “भौतिक र मनोवैज्ञानिक चोट” पु¥याएको भन्दै एक इजेप्टेली वकिलले रामोश माथि ८७.४ करोड अमेरिकी डलरको मुद्दानै हालेका छन् ।
देशवासीको लागि शालाहको जादु मैदानमात्र सिमित छैन । उनी एक त्यस्तो बिरलै खालको व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गर्छन् जसको पछाडी वर्ग र राजनीतिको सीमाना तोडेर सम्पुर्ण इजिप्टेलीहरु एक भएका छन् ।
सन् २०११ मा लामो समयदेखि देशमा शासन गरिरहेका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकलाई सत्ताच्युत गरेपछि देशले भोगेको राजनैतिक र आर्थिक उतारचढावपछि समाजमा कोरिएको विकराल विभाजनमाझ यसलाई ठूलो सफलता मान्नुपर्छ ।
“मोहम्मद शालाह निक्कै महत्वपूर्ण छन् किनकी उनी एक प्रतिक हुन् …तुतेनखमुनजस्तो, पिरामिडजस्तो,” संसदीय युवा र खेलकुद समितिका प्रमुख मोहमद फराग अमेरले भने ।
२५ वर्षको उमेरमा शालाहलाई लियोनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग तुलना गरिएकोमा काइरोमा बस्ने खेल पत्रकार हरते महेरले भने : “यो इतिहासको कुनै पनि समयमा इजिप्टेली खेलाडीका लागि पहिले कहिल्यै नभएको कुरा हो ।”
इजिप्टले २८ वर्षपछि पहिलो पटक आफ्नो विश्वकप खेल शुक्रबार उरुग्वेविरुद्ध खेलेर शुरु गर्दैछ । शालाह पूर्णत ठीक भए नभएको बारे शंका जारी रहे पनि शालाह खेल्ने निश्चित भइसकेको छ । उनी सहभागी नहुँदा यो निक्कै लज्जाको विषय हुन्थ्यो । उनी प्रतिभावान भएकाले मात्र होइन । इजिप्टलाई रसियाको विश्वकपमा पु¥याउन उनको महत्वपूर्ण हात छ । अक्टोबरमा रसियाको टिकट निश्चित गर्ने कङ्गोविरुद्धको खेलमा इजिप्टले कङ्गोलाई दुईका विरुद्ध एक गोलले हराउँदा दुबै गोल उनले हानेका थिए ।
खेल सकिएपछि इजिप्टेलीहरु झण्डा हल्लाउँदै, हर्न बजाउँदै तहरीर स्क्यावरमा पुगेका थिए, त्यही तहरीर स्क्यावर जुन मुबारिक विरुद्धको लोकप्रिय आन्दोलनको केन्द्र थियो । त्यो दिन तहरीर स्क्यावरमा देखिएको उत्साहको माहोलमा धेरैले क्रान्तिका शिखरका दिनहरुको प्रतिबिम्ब भेटे । र, धेरै पछि काएरोमा यस्तो एकताको दृश्य देखिएको थियो ।
“मलाई लाग्छ राजनैतिक उभारका दिनपछि विश्वकपमा हाम्रो छनौट मात्र त्यस्तो क्षण रह्यो जब सम्पूर्ण इजिप्टेलीहरु खुसी भएका थिए,” महेरले भने ।
सन् २०११ मा अरब स्प्रीङ शिखरमा रहँदा मुबारकको पतनसँगै लगभग ३० वर्षदेखि देशलाई जकडिरहेको निरङ्कुशताको अन्त्यले यो दशलाई एक क्षणिक आशा दिएको थियो । तर, लोकतन्त्रतर्फको संक्रमण निक्कै असहज सावित भयो र यो तब असफल भयो जब इजिप्टको पहिलो जन निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई सन् २०१३ मा देशको सेनाले अपदस्थ ग¥यो । देशवासी माझमा अत्यन्त ध्रुवीकृत व्यक्तित्व रहेका मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टीका मोर्सीलाई सत्ताच्युत गरिँदा समाजको एक हिस्साले स्वागत गरेको थियो ।
त्यो समयदेखि इजिप्टलाई राष्ट्रपति अब्देल फताहा अल–सीसीले अत्यन्त कढाईका साथ शासन गरिरहेका छन् । उनले समकालिन इजिप्टेली इतिहासमै विरोधीहरुप्रति सबैभन्दा क्रुर खालको धरपकड जारी राखेका छन् ।
इजिप्टेली फुटबल पनि यो ध्रुवीकृत राजनीतिको भूमरीमा परेको छ । शालाहको इजिप्टमा रहेको लोकप्रियतामा आशिंक रुपमा यो विभाजनबाट जोगिन सक्नुको पनि हात छ ।
“उनी निक्कै चलाख छन् । उनी पहिले त फुटबलर मात्र हुन्,” उदारवादी दोस्टोर पार्टीका पूर्व नेता तथा सरकारका कट्टर आलोचक खालिद दाउदले भने ।
उदारणको लागि अघिल्लो राष्ट्रपति चुनावको एक घटनालाई लिन सकिन्छ । जनवरीमा इजिप्टेली फुटबल एसोसियसनले मार्चमा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनाबमा सीसीलाई समर्थन गर्ने घोषणा ग¥यो । त्यस निर्वाचनमा कुनै पनि बलियो विपक्षीलाई चुनाबमा उठ्न निषेध गरिएकाले विपक्षीहरुले यस कर्मकाण्डी भनेर आलोचना गरेका थिए । तर शालाहले यस निर्वाचनको समयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
यस हिसाबमा उनी अर्का चर्चित अरब खेलाडी मोहमद अबुत्रिकाभन्दा फरक छन् । इजिप्टका पूर्व फरवार्ड र शालाहका पनि नजिक रहेका अबुत्रिकाले डिसेम्बर २०१३ मा सन्यास लिनु अघि इजिप्टको टिमलाई दशकौँ कप्तानी गरे । तर, उनको खेल करियर मुस्लिम ब्रदरहुडप्रतिको सहानुभुतिको आरोपले छायाँमा पा¥यो । उक्त समूहसँगको सम्बन्धको आरोपमा उनलाई अघिल्लो वर्ष आतङ्कवादी सूचिमा नै राखियो । सन् २०१३ मा सत्ताच्युत गरिसकेपछि मुस्लिम ब्रदरहुडलाई आतङ्कवादी संगठन घोषणा गरिएको छ । उक्त संगठनसँगको सम्बन्धको आरोपलाई अबुत्रिकाले खण्डन गरेका छन् ।
अबुत्रिकाले जस्तै शालाहले आफ्नो विनम्रता र दयालु स्वभावले इजेप्टेली समाजको सबै हिस्साको मन जितेका छन् । “उनको व्यक्तित्व र उनको विनम्रताका कारण उनी महत्वपूर्ण छन्,” काएरोको एक क्याफेमा बेटर रहेका ३४ वर्षे हानी मोहमदले भने । उनले काम गर्ने क्याफेमा शालाहको एक ठूलो भित्तेचित्र रहेको छ जहाँ आगन्तुकहरु सेल्फी खिचिरहेका भेटिन्छन् । “उनी निक्कै असल भएकाले उनलाई धेरै मानिसहरुले मन पराउछन्,” हानीले भने ।
४२ वर्षे इन्जिनियर तरनिम मन्नाले भने, “उनले कहिल्यै आफ्नो धरातल बिर्सेनन् । उनी इजिप्टेली भएकोमा म निक्कै गर्वित छु ।”
प्रत्यक गोल हानिसकेपछि जसरी उनी प्राथना गरेजस्तो अवस्थामा बस्छन् जसरी उनले इजिप्टको राष्ट्रिय खानाप्रतिको प्रेमबारे बोल्छन्, जसरी उनी आफ्नो स्थानीय गाँउ नर्गिगलाई सहयोग गर्छन् र त्यसबारेमा प्रचार गर्दैनन् यी सबै कुराले उनलाई आफ्नो राष्ट्रका युवाहरुमाझ ‘रोल मोडेल’ बनाएको छ ।
धेरै इजिप्टेलीहरुको विचारमा उनले इजिप्टको सकारात्मक र बलियो छविलाई विदेशमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । साथै एक सानो गाँउबाट उठेर यो हदको अन्तराष्ट्रिय उदयले युवाहरुलाई प्रेरणा दिएको छ । उनको उदयको सन्देश स्पष्ट छ – कडा मिहेनत र एकाग्रताबाट जे सुकै पनि सम्भव छ । यो कुार उनी अफै पनि विभिन्न अवसरमा औँल्याउने गर्छन् ।
धेरै इजिप्टेलीहरु क्रान्तिपछिको लामो आर्थिक गिरावट, मुल्य वृद्धी र आईएमएफसँग १२ अर्ब डलर ऋण लिनको लागि सरकारले ल्याएको आर्थिक सुधारपछि भएको सहुलियतमा कटौतीले थाकिसकेको यो समयमा शालाहको कथा यो देशले खोजिरहेको कुरा थियो । र सायद उनले नर्गिगभन्दा बढी माया अन्यत्र पाएका छैनन् ।
शालाहको गाँउ नर्गिग
काएरोभन्दा ८० कि.मी. टाढा रहेको १५,००० मानिसहरु बसोबास गर्ने सानो गाँउ नर्गिगलाई ज्यास्मीनको खेतीले घेरिएको छ । कुखुरा र गाईहरु धुलाम्मे र पिच नगरिएको गल्लीहरुमा घुमिरहेको भेटिन्छ । धेरै घरका बाहिरी ढोकाहरु खुल्लै देखिन्छन् । यसले यस गाँउमा छिमेकीहरुबीच रहेको आत्मिएता देखाउँछ ।
शालाह प्रत्यक सिजनको अन्त्यपछि एक पटक यो गाँउ आउने गर्छन् । नर्गिगका मेयर महेर शेतियाका अनुसार यो वर्ष विश्वकपका कारण उनी आउन पाउदैनन् होला । कुराका क्रममा शेतियाले शालाह अघिल्लो रामादानमा आफ्नो घरमा आएको कुरा सम्झे । त्यो समय रोमाका खेलाडी रहेका शालाह घाइते भएका शेतियालाई भेट्न आएका थिए ।
“मोहम्मद निक्कै शान्त मानिस हुन्, उनी त्यति धेरै बोल्दैनन्,” शेतियाले भने, “उनी निक्कै साधारण छन्…त्यो समय उनले लिभरपुलसँग केही हुन सक्ने बताएका थिए ।”
गाँउका कसैले पनि आफ्नो गाँउको एक सोझो केटो यो उचाईसम्म पुग्ला भन्ने अनुमान समेत गरेका थिएनन् । अब जब त्यो नसोचेको कुरा यथार्थमा बदलिएको छ, तब यो एक अर्कामा आत्मिय रहेको समूदायमा उनी गर्वका पात्र भएका छन् । “उनले त्यो स्थानमा पुग्न निक्कै मेहनत गरेका छन्,” शेतियाले भने ।
किशोर अवस्थामा शालाहले कसरी हप्ताको पाँच दिन दैनिक नौँ घण्टा टे«नको यात्रा गरेर उनको घरबाट कायरोमा रहेको अरब कन्ट्राक्टर टीमसम्म यात्रा गर्थे भन्ने कथा उनको गाँउमा एक किम्बदन्ती बनेको छ ।
नर्गिगको त्यो चामत्कारिक केटोले आफ्नो स्टारडमबीच पनि आफ्नो मूल भूमि बिर्सिएको छैन । उसले आफ्नो समूदायको गुण फर्काउनको लागि आफ्नो धन प्रयोग गरिरहेका छन् । शालाहले एक धार्मिक स्कूल, एक परोपकारी खाना बजार र गाँउमा एक एम्बुलेन्स स्टेशनको निर्माणमा खर्च गरिसके ।
“उनी बदलिएका छैनन्, उनी घमण्डी भएका छैनन्,” मोहमद शालाह च्यारिटीका निर्देशक मोहमद अल बहनासीले भने । यो संस्थाले प्रत्यक महिना खाँचोमा परेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्छ ।
शालाहको परोपकारी कामबारेका खबर विभिन्न समयमा इजिप्टमा भाइरल हुने गर्छ । जसमध्य अधिकांश झुटा हुन्छन् ।
उदाहरणको लागि हल्ला भएजस्तो उनले नर्गिगका प्रत्यक जोडिहरुको विवाह खर्च बेहोर्दैनन् । तर, यो हल्लाले पनि इजिप्टेलीहरु आफ्नो राष्ट्रिय हिरोप्रतिको प्रेम देखाउँछ ।
आफ्नो गाउँको सबैभन्दा चर्चित बासीको नाममा रहेको नर्गिगको एक युवा क्लबमा स्कूलपछि फुटबल खेलिरहेका नौं वर्षका जाइद जुम्माहले यो राष्ट्रको मुडलाई समष्टी व्यक्त गरे । जब उनलाई कुन टिमको समर्थन गर्छौ भनेर सोधियो, उनले भने : “मोहमद शालाह” ।
PREVIOUS POST Previous post: काजोल की बहिनी तनीषा माथि पनि कुटपिट गरेका थिए अरमानले
NEXT POST Next post: बजेटका असन्तुष्टि पार्टी नेतृत्वमा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, असार १, २०७५ १७:१६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, असार १, २०७५ १७:१६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, असार १, २०७५ १७:१६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, असार १, २०७५ १७:१६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, असार १, २०७५ १७:१६